2017 April 04 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
WARARKA ROOB: Faahfaahin ka soo baxaysa Roobab ka da’ay qeybo kamid ah gobalada Puntland
GAROOWE(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya deegaano kuyaala Koonfurta gobalka Sool, ayaa sheegaya in ay roobab lagu diirsaday galabtay ka da’een goobahaas, gaar ahaana dhulka Miyiga ah ee deegaanada Saaxdheer, Dharkeyn-Genyo iyo goobo ku dhaw dhaw. Dadka deegaanka oo lala hadlay ayaa sheegaya in meelaha qaarkood uu baraagaha biyo galiyey, iyadoo ay wararka qaarna sheegayaan in […]
SAWIRRO:- Maxaa Ka Soo Baxay Kulankii Ugu Horeeyay Ee Aqalka Cad ku Dhex Maray Madaxweynaha Mareykanka Trump Iyo Madaxweyne Afican Ah??
NEW YORK(P-TIMES)-Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka Cad kusoo dhaweeyay Madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax al-Sisi, waxa ayna labada Madaxweyne kawada hadleen arimo badan oo muhiim ah. Kulanka labada Madaxweyne ayaa looga hadlay xoojinta xariirka soo jireenka ahaa ee ka dhaxeeya dowlada Mareykanka iyo Masar iyo sidii ay labada dowladood ula wada dagaali lahaayeen Kooxaha […]
DEG DEG: Wasaaradda Amniga Puntlland oo ku dhawaaqday go’aan deg deg ah
GAROOWE(P-TIMES)- Kulan xasaasi ah oo ka dhacay Xarunta Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta ee dawladda Puntland ayaa looga hadlay arrimaha Puntland, gaar ahaana kan caasumada Garoowe. Saraakiisha Talisyada kala duwan ee ciidamada dawladda Puntland ayaa ka qeybgalay shirkan, waxaana saxaafada loo diiday in ay goobjoog ka ahaato shirarkan looga hadlayay Amniga. Kulankan markii uu soo dhamaaday […]
Kenya oo Hawada ku joojisay Duulimaad ka dhoofay Muqdisho, qasabna ugu dajisay magaalada Wajeer
MUQDISHO(P-TIMES)- Dawladda Kenya ayaa diiday in si toos ah ay ugu dagto magaalada Nairobi diyaarad ka duushay magaalada Muqdisho, waxaana amar lagu bixiyey in ay ka dagto magaalada Wajeer ee Waqooyi bari dalka Kenya. Wararka ayaa sheegaya in diyaaraddan ay diideen kooxda Hawada ee dalka Kenya in ay gaarto garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi, waxayse […]
DHAGEYSI XASAASI AH: Wasiirka Amniga cusub ee Somalia oo ku dhawaaqay war xasaasi ah.
MUQDISHO(P-TIMES)- Wasiirka cusub ee Amniga dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ka hadlayay magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub oo lagu xalinayo Amniga magaaladaas. Wasiirka cusub ayaa sheegay in ay keeni doonaan qorshe cusub oo ay ugu talo-galeen arrimaha sugida amniga magaalada Muqdisho, oo ay xoogooda oo dhan iskugu keenayaan sidii looga guuleysan […]
SAWIRRO:Gargaar ah Cunto Nafaqeysan oo laga dajiyey Muqdisho, Yaase keenay?
Diyaarada Turkish Airlines ayaa maanta ka dhabeysay balan-qaadkeeda ahaa inay Soomaaliya u daabuleyso 60 ton oo ah cunto nafaqeysan iyo daawo loogu tala galay xaalada abaaraha iyo macluusha ka jirta Soomaaliya. Olole dhinaca Internet oo lacago loogu uruurinayay Abaaraha Soomaaliya oo ay sameeyeen bishii la soo dhaafay shaqsiyaad caan ah oo ay ka mid yihiin Jilaaga […]
SAWIRRO: Puntland oo Dhakhaatiirta Xanaanada Xoolaha u dirtay gobalo kala duwan ee Puntland
GAROOWE(P-TIMES)- Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee dawladda Puntland ayaa dhakhaatiir cusub u dirtay gobalo kamid ah Puntland oo ay hadda joogeen Dhakhaatiir talaal & Daweyn u aaday kal hore, isla markaasna dhakhaatiirtan cusub lagu xoojiyey. Kooxahan Dhakhaatiirta ah ee la diray ayaa ah 10 kooxood oo cusub, waxayna tagi doonaan gobalo ay hadda ka socota shaqo […]
WAR CUSUB: Baarlamaanka Puntland oo ansixiyey Heshiiskii CCECC & Xukuumada, muxuuse dhigayaa heshiiskan?
GAROOWE(P-TIMES)- Warar soo gaaray Warsidaha Puntlandtimes ayaa cadeynaya in ay guddiga joogtada ah ee golaha Wakiilada Puntland ay meelmariyeen heshiiskii ay gaareen Shirkada CCECC ee laga leeyahay dalka Shiinaha & Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo wadada u xaaraya arrimo badan oo mashaariic horumarineed ah. Guddiga joogtada ah ayaa meelmariyey heshiiskan oo laga soo […]
WAR DEG DEG AH: Maleeshiyad hubeysan oo isku aruursaday degmada Hobyo & Markabkii Hindiya laga lahaa oo gaaray
HOBYO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Hobyo ee Koonfurta gobalka Mudug ayaa sheegaya in maleeshiyaad badan oo ah Burcad Badeedii 2011-kii ay hadda isku aruursanayaan xeebta magaaladaas, ka dib markii uu soo dhawaaday markab ay labo maalmood ka hor kasoo afduubteen biyaha caalamiga ah, kaas oo hadda ku soo dhaw Xeebaha Hobyo. Kooxaha Burcad Badeeda […]
UPDATE: Madaxweynaha Puntland oo kusii jeeda dalalka Imaaraatka Carabta & Itoobiya
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa goor dhaw ka duulaya magaalada Garoowe, isagoo ku sii jeeda dalka Isku taga Imaaraatka Carabta oo uu kula kulmayo Madaxda Shirkada DP-World, iyadoo ay halkaas ay horey u joogeen Madax katirsan Xukuumada iyo baarlamaanka Puntland. Madaxweynaha ayaa lafilayaa in ay socdaalkiisan ku wehlin doonaan xubno kamid […]